अनसन-म्यान डा.केसी डलरवादी, दलाल र माफियाका इन्ट्रेष्ट टुल | Namastepost.com
अनसन-म्यान डा.केसी डलरवादी, दलाल र माफियाका इन्ट्रेष्ट टुल
विचार January 13, 2018 सि बिकल्प ,
कनै समय यस्तो थियो डा. गोविन्द के सी एक अदिशं लाग्थ्यो, त्यो विश्वास आज पनि झिनो मात्रामा जिवितै छ । उनै केसीले नेपाली जनताकोे मेडिकल शिक्षा र सेवामा सहज पहुच हुनुपर्छ र पाउनुपर्छ भन्छन भने सुन्दा उनको निष्ठालाई मनैदेखि सलाम गरिन्थ्यो । उनको सादा जीवन, सरल र सहजताको प्रशंसक को थिएन को छैन् होला र ।
उनको अनसन मुभमेन्ट पछिल्लो नेपाली युगको चर्चित र स्थापित आन्दोलन पनि बन्यो । नेपालमा कुनै एक व्यक्तिले दर्जनौ पटक बसेको अनसन, यो पहिलोे घटना हो । अनसनको शिलशिला आजको मितिमा पनि जारी छ । मेडिकल सेवा र शिक्षालाई जनताको एकसीसमा पु¥याउने उनको यो लक्ष्य निकै चर्चित बन्यो ।
नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रमा आमुल परिर्वतनको मार्ग कोर्ने यो अभियान यस क्षेत्रमा हुने विकृति बिसङ्गति र भष्ट्राचारले आक्रान्त सरोकारवाला पक्ष मुख्यतः अभिभावक र विद्यार्थीले राहातको ठुलो महसुस गरको पाइन्थ्यो । यसै क्षेत्रमा यसप्रकारको युगान्तकारी योगदान गर्ने व्यक्तित्व डा. केसी आजको नेपालको एक चर्चित, एवं स्थापित ब्रान्ड हो जो आज चर्चा र विबादको शिखरमा छ ।
विद्यार्थीको शुल्क सस्तो, सर्वशुलभ र बैज्ञानिक हुनुपर्छ भन्ने माग राखेर अनसन बस्ने डा. केसी आजका मितीमा मेडिकल कलेजहरुले साठी सह्त्तरी लाख लिदा पनि चु बुलेको सुनिन्न जब कि यि माग सहित उनले पहिलो अनसन बस्दा यस क्षेत्रमा शिक्षा शुल्कका नाममा बिस बाइस देखि अधिकतम तिस बतिस लाख मात्र पर्न जान्थ्यो ।
डा. केसीले चिकित्सा क्षेत्रमा शिक्षा र सेवाको स्थरउन्नति र जनताको पहुँचको इस्युसहित आन्दोलित हुने उनी बिचमा डिन नियुक्ति प्रकरण हुदैँ लोकमानको महाअभियोग अनि बर्खास्ती र आज वाहाल प्रधानन्याधिस गोपाल प्रराजुली भष्ट्रचारी भएको आरोपसहित राजीनामा मागिरहेका छन र अदालतको मानहानिका अभियोगमा उनलाई प्रहरीले प्रक्राउ गर्ने देखि चरणबद्ध प्रक्रिया पश्चात् अदालती प्रक्रियाबाट छुटिसकेका छन् र उनको मुद्दा(नक्कली सटिफिके र दुईवटा नागरिकता) अहिले सर्वोच्च अदालतको काधमा थोपरिएको छ अनि उनै केसीसँग सरकारले सहमती गर्दै अनसन समेत तोडिसकेका छन् । उनको अनसनको सुरुवात र अनसनको अन्तयसँग जोडिएको पुच्छरको सहमती बाहेक अरु उल्लेखनिय उपलव्धी पाईएको छैन् ।
हो यो अनसनको शिलशिला र इसियुका उत्तारचढावले गर्दा डा. के सीको अभियान कतै खहरे भेल त हुने होइन ? भन्ने लागेकै छ अनि चिन्ता यति मात्र छ कि त्यो भेलले सुकुम्बासी गरिबलाई मात्र बगाएको र उजाड बनाएको नजिर छ । तिनै गरिब आधारभूत जनता जो कहिले बाढिको प्रकोप त कहिले झाडाँपखालाको महामारी र कहिले राजनितिक याम्बुस—इन्काउन्टरमा परेका तिनको घाउमा मलम बन्नुपर्ने डा. के सी कतै तिनकै आत्माहत्याको माध्यम र कारण त बन्दैछैन् भन्ने जोडदार चिन्ता र चासो छ ।
डा. केसीसँगका यी भावनात्मक मतभेत छन् हुनेनै छन् । यसका बाबजुत जेष्ठ नागरिक र सामाजिक अगुवा मात्र नभएर देशकै प्रभावशालि व्यक्ति बनेका उनीसँग सहमत हुने पक्ष पनि छन् । जो खुलेरै लेख्न र बोल्न सकिन्छ ।
१)मेडिकल शिक्षा र सेवालाई जनतासँग जोड्ने माध्यम बनेका डा. केसीले यस क्षेत्रलाई दलाल, माफिया मुक्त गराउने छन्, यो सेवा र शिक्षा जनताको सहज पहुचमा हुनेछ भन्ने जनताको अटुट विश्वास छ । यस क्षेत्रमाभएको भष्ट्रचार र बेतिथिका कारण आक्रान्त–आतंकित बनेका बिद्यार्थी–अभिभावकलाई यसले ठूलै राहत दिलाएको छ ।
यस कदमले नेपाली मेडिकल शिक्षा जग्त वर्तमानमा विकृति र भ्रष्ट्र भए पनि भविष्यमा सम्भावना युक्त र जनताको पहुँच सुनिश्चित हुनेमा जनविश्वास भएको पाइन्छ । यसैसँग जोडिएका चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइसकेको छ जसले् गर्दा १० बर्षसम्म उपत्यका भित्र मेडिकल कलेज खोलन नपाईनेर एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढि सम्वन्ध दिन नपाइने भनिएको छ ।
२)भष्ट्रचार माथिको चिरफार चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा हुने नियुक्तमा डा.के सीको उपचार भनेझै यो नाराले पनि रामै्र स्थान लिएको पाइन्छ र स्थापित पनि छ । मेडिकल क्षेत्रको नियुक्तिमा हुने भष्ट्रचार र लेनदेन अनि कनिष्टलाइ काखा र बरिष्ठलाई पाखा, यो जो सरकारी रवैया छ यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने माग राख्ने डा.केसी सुशासनका पक्षधर भएको पाइन्छ र सत्य जेसुकै भए पनि देशका नेता, मन्त्री,प्रधानमन्त्रीसम्म यस क्षेत्रमा नियुक्तिका लागि किन्ने खेलोमेलो बन्द भएको बुझ्न थालिएको छ । अनसन मार्फत आगो ओकल्ने डा. केसीको यो प्रयत्नलाई पनि सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
३)राष्ट्रिय स्तरको भ्रष्ट्राचार विरुद्धको लञ्चर पछिल्लो समय डा.केसीको भष्ट्रचार विरोधी अनसन अभियान पनि केही असहमतिका बावजुद ठिकै मान्न सकिन्छ । भ्रष्ट्राचार विरुद्ध बोल्ने डा. केसीका कारण जनतामा व्यवस्था प्रतिको निराशा आशामा बदलिएको पाइन्छ । यसलाई संसदबादीले उपयोग गरेका छन् । भारतका अन्ना हजारेका रुपमा उनी देखिनु र भ्रष्ट्राचार विरोधी अभियानताका रुपमा विकास हुनु राष्ट्रका लागि फलदायी नै हो ।
मुख्य यी नै प्रमुख तिन बुदाँ हुन् जहाँ टेकेर डा.केसीमाथि सफ्ट सर्मथन गर्न सकिन्छ । उनका फ्लोअर्सले पनि यीनै पोइन्टको चर्काे वकालत गर्ने गर्दछन् । तर डा.केसीमा पछिल्लो समय डेरा गरेर बसेको उनको घमण्ड र अहंकार उनकै लागि घाडो हुने निश्चितप्रायः छ । नेपालको मेडिकल शिक्षा र सेवाका पिता भनिएका, मानिएका र ठानिएका अविवाहित डा.केसीका यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय सर्मथक भन्दा आलोचकको सङ्ख्या ठुलो छ ।
मेडिकल शिक्षा सर्वशुलभ र सस्तो भन्ने माग राखेर चर्चामा र स्थापित भएका उनी यही मागलाई अनसन म्यान बन्नका लागि भ¥याङ्गका रुपमा प्रयोग गरेको र दुरुपयोग गरेको उनका आलोचको आरोप छ जो साँचो हो । अध्यारोलाई हत्या गरी उज्यालोका जन्मदाँता डा.केसी मिरमीरेमै ओईलाईएको बुढो घाम भएका छन्, जसमाथि अब निस्वार्थिले अपेक्षा गर्ने ठाउँनेै देखिन्न ।
गरिबका छोरा छोरीलाई डाक्टर बनाउने सपना देखाएका डा.केसी आज भोलि डलरबादी, भ्रष्ट्रचारी र घुसखोरीका सपना सर्जक बनेका छन् । सुशासनका लागि गलत प्रवृतिका विरुद्ध लड्नु पर्नेमा आफुलाई बेठिक लाग्ने पात्र केन्द्रीत र इगोबेष्ड नियतमा लड्दैछन्, उनी ।
भ्रष्ट्राचार प्रवृतिका विरुद्ध लड्नु पर्ने डा.केसी किन जहिल्यै पात्र केन्द्रीत विरोध अभियानमा छन् ।
यो देशका भेट्रान भ्रष्ट्राचारी लोकमान कार्काे र प्रधान न्याधिश गोपाल पराजुली मात्र हुन् ? यो देशमा हुने अरु सबै खाले भ्रष्ट्राचार नदेखिएकै हुन् त ?सुशिला कार्की भ्रष्ट्राचारी नभएकोे प्रमाण नभएकै हो त ?
एक्काईस अर्ब घोटालाका नाइके चुडाँमणि शर्मालाई अदालतले किलिन चिट दिदाँ कसरी अदालत ठिक ? गोपाल खड्कालाई पुर्ण वाहालि गर्ने अदालत कसरी ठिक ? एनसेलले तिर्नुपर्ने तिर्चालिस अर्ब लाभांश नतिर्दा किन मौन ? दश बर्षे जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड–बाबुराम के कारणले निर्दोष, प्रचण्ड–बाबुरामकै कार्यकर्ता बालकृष्ण ढुङ्गेल कसरी अपराधी ? यी पात्रका विरुद्ध अनसन बस्ने हिम्मत नभएकै हो त ?
मेडिकल शिक्षा पढ्न चाहने विद्यार्थीको विदेश पलाएन रोकथाममा किन उदासिन ? यो देशका पचासौ लाख युवा बेरोजगार भएर विदेशीदा स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्थाका लागि किन पहल नगरेको, के यो इस्युमा अनसन बस्न सकिन्न ?
सिमानामा विदेशीको गोली लागेर मृत्यु भएका गोविन्द गौतमका विषयमा किन चुप, के बैदेशीक हस्तक्षपका विरुद्ध अनसन बस्न सकिन्न ? के नेपाल भारत विच भएका असमान सन्धि सम्झौताका विरुद्ध अनसन बस्दा मरिन्छ र ? के देशको जल श्रोत क्षेत्रमा भएको भारतीय एकाधिकारका विरुद्ध बोल्दा लाटो भइन्छ र ?
के डा.केसीको रिहाईको माग गर्दै सडकमा कुर्लिने डाक्टर लालध्वज,पुर्व पत्रकार रविन्द्र मिश्र र काङग्रेसी गगन थापासँगको कनेकसन रहस्यमय छैन् ? यी पात्रसँगको सम्बन्ध यीनकै राजनीतिक इन्टे«स्ट पुर्ति गर्नेसँग छैन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?
यी सबै बिषयलाई सुष्म ढङ्गले केलाउँदा डा.केसी चर्चाका भोका र प्रयोगका पोका भएको स्पष्ट हुन्छ । माथि उठान गरिएका बिषय डा.केसी विरुद्धको बिस बमन भन्दा पनि स्खलनको न्यानोमा तातिने ढाल उन्मुख बनेका उनी प्रतिको साहानुभुति हो ।
जनयुद्ध र पत्रकारीतालाई लिलाम गर्ने बाबुराम र रविन्द्रहरुलाई डा. केसीले किन धानेका छन् अनुमान स्पष्ट छ; उनीहरुको बिचको साँठगाँठ निकै घिनलाग्दो र अत्याधिक घातक हुने निकट् भबिष्यमा स्पष्ट हुदैँ जानेछ । अन्त्यमा यी सबै पापबाट पखालिन र पवित्र हुन डा.केसीले चिकित्सा शिक्षा र सेवा सम्बन्धी पुराना मागहरु निश्कर्षमा पु¥याउनै पर्ने हुन्छ । सँगसगै पात्र भन्दा प्रवृति र व्यवस्थाकै विकल्प सोच्दा फलदायीने हुनेछ ।